Guddi Ay Xukuumadda U Xil Saartay Baaritaanka Dadkii Ku Waxyeeloobay Deegaan Ku Dhow Leego Oo Kormeeray Isbitaalka Madiina – idalenews.com
Guddi Ay Xukuumadda U Xil Saartay Baaritaanka Dadkii Ku Waxyeeloobay Deegaan Ku Dhow Leego Oo Kormeeray Isbitaalka Madiina
Guddigii ay Xukuumadda Soomaaliya maanta uxil saartay inay baaritaanno ku sameeyaan Dadkii ay askar ka tirsan Ciidamada amisom ku waxyeeleeyeen Deegaanka Leego ee Gobolka Shabeellada Hoose ayaa gelinkii dambe ee maanta kormeeray isbitaalka Madiina halkaas oo lagu dabiibayo 7 kamid ah carruurtii ku dhawacantay rasaas ay ku fureen ciidamada amisom.
Guddigaasi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka islamarkaana ay kamid ahaayeen Wasiir ku xigeennada warfaafinta iyo maaliyadda ayaa u kuurglayay xaaladda ay ku suganyihiin bukaannadaasi iyagoo ku wareejiyay ehellada muwaadiniintaasi lacag dhan 10 kun oo dollar oo ay ugu talagashay in lagu caawiyo dadkaasi.
Xubnaha guddiga ayaa wartbixin ku saabsan xaaladda caafimaad ee ay ku suganyihiin bukaannada ka dhageystay Saraakiisha caafimaadka isbitaal madiina iyo ehellada dadkii ay waxyeellada soo gaartay.
Wasiirka arrimaha gudaha iyio amniga Qaranka Mudane C/kariin Xuseen Guuleed oo saxaafadda kula hadlay Isbitaalka madiina ayaa sheegay inay baaritaanno ku sameynayaan dhacadaasi islamarkaana ay Xukuumaddu ku dedaaleyso sidii wax loogu qaban lahaa dadka dhibaateysan.
Sidoo klae wasiir ku xigeenka warfaafinta Mudane Ibraahim Isaaq Yarrow oo kamid ah guddiga ay magacaabeen xubnaha golaha wasiirrada ayaa xusay in Xukuumadda ay ugu talagashay lacag dhan 10 kun oo dollar oo wax loogu qabanayo dhibbaneyaasha taasi oo ay si deg deg ah usoo gaarsiiyeen si loogu dabiibo.
Mid kamid ah ehellada dadkii ay waxyeeleeyen ciidamada amisom ayaa uga mahad celiyay DF Soomaaliya deeqda lacageed oo ay gaarsiisay waxa uuna ka codsaday xukuumadda in jawaab cad ay ka keento sababta ay ciidamada amisom u beegsadeen dad aan waxba galabsan.
Askar ka tirsan amisom ayaa maalin ka hor rasaas ku furay meel ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo ku taalla deegaanka leego ee gobolka shabeellada hoose iyadoo DF Soomaliya ay dedaal xooggan ku bixinayso sidii baaritaanno dhammeystiran loogu sameyn lahaa askartii ka dambeysay falkaasi tallaabana looga qaadi lahaa ayadoo ay Saraakiisha AMISOMna sheegeen iney diyaar u yihiin bixinta magdhaw.
Hillary Clinton oo ku dhowaaqday in Maraykanku si rasmi ah u aqoonsaday dowlada Soomaaliya